Mufananidzo unoshamisa ne Brian Cassella, Photojournalist
Zvita 28, 2008 na8: 48 PM
Mazhinji mablogiki ari kunze-kwe-cuff, wega chirevo chinotsigirwa nemaminetsi gumi pane injini dzekutsvaga. Chisinganzwisisike hachisi chekuti zvimwe zvakanaka uye zvimwe zvakashata, kana kunyange izvo izvo vamwe vanozivikanwa uye vamwe vasina. Izvo zvinonyanya kuda kuziva kuti isu tinoshingairira kupedza uye kuremekedza zvemukati izvo zvinongomira zvishoma zvishoma pane kungotaura zvisina basa.
Ini ndinofungidzira kuti kufanofungidzira kuverenga-pamwe nekuverenga gan- zvichanyanya kuoma sezvo blogging ichiramba ichikura mukuzivikanwa. Kusvikira chiitiko ichi chadzika pasi apo patinokwanisa kutarisira kutarisira kunzwisisika kwayo chaiko.